Raharaha fandroahana mpiasan’Ambatovy : handrasan’ny maro ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana #canada #sherrit #ambatovy | NewsMada
Raharaha fandroahana mpiasan’Ambatovy : handrasan’ny maro ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana #canada #sherrit #ambatovy
Par Taratra sur 09/04/2016
Raha tsy misy ny fihemorana, hivoaka ny 14 avrily ho avy izao ny didim-pitsarana mahakasika ilay raharaha mampifanolana ny Tetikasa Ambatovy sy ilay mpiasa iray noesorina ka nitory azy. Handrasan’ny mpanara-baovao maro ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana, raha ho ara-drariny na tsia. Sao mantsy hisy olona akaiky ny mpitondra indray hitsabaka anatin’ny raharam-pitsarana, ka hanao tsindry ao anatin’izany.
Raha tsiahivina, nitory ny tetikasa Ambatovy noho ny « fandroahana tsy ara-drariny » ny ramatoa iray mpiasa tao aminy. Nilaza kosa anefa ny orinasa fa « fandroahana ara-dalàna, noho ny tsy fanajany ny etika tamin’ny 2013 », no nahazo ilay ramatoa. Tohin’ity fifanolanana ity, nakaton’ny fanjakana nanomboka ny 17 febroary lasa teo ny kaontin’ny tetikasa Ambatovy any amin’ny banky, noho ny fanomezan’ny fitsarana ambaratonga voalohany onitra mitentina 567 tapitrisa Ar ho an’ilay ramatoa mpiasa taloha.
Ny zava-misy azo tsapain-tanana aloha, misy fiantraikany ratsy amin’ny toekarem-pirenena amin’ny ankapobeny sy ho an’ny tetikasa Ambatovy manokana ity raharaha ity. Efa misedra fahasahirana avokoa ireo orinasa mpitrandraka harena an-kibon’ny tany noho ny fitontongan’ny tolotra eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Ao anatin’izany indrindra anefa no misy ny fangatahana onitra mihoam-pampana, izay azo antoka fa famonoana haingana ny orinasa raha mahazo rariny eo amin’ny Fitsarana.
Fantatra mantsy fa nahatratra 2.3 miliara Ar ny onitra notakin’ilay ramatoa tamin’ny voalohany, izany hoe any amin’ny karama mandritra ny zato taona ho an’ny mpiasa iray ao Ambatovy. Tsy nisy fijerena ny mpiasa hafa, izay efa matahotra ny ho aviny noho ny fidinan’ny vidin’ny nikela amin’izao fotoana izao izany. Mitodika any amin’ny Fitsarana ny mason’ny mpanara-baovao…